यस्तो छ प्रकृति र यसको लिला
के थकाई मन्त्रले ठिक हुन सक्ला ?
सलहेश फूलबारीको फूलको वैज्ञानिक आधार के त ?
टाउको दुख्नुको कारणहरु तथा अपनाउनुपर्ने सावधानीहरु
गहिरो निन्द्राका लागि के गर्ने ? जानी राखौ
प्रकृति र यसको लिला
सेप्टेम्बर 20, 2018 सेप्टेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक	0 Comments औषधी, डा. राम बहादुर बोहरा
प्रकृतिको लिला अप्रमपार छ । हामीले सधै एउटा कुरा कदापि विर्सनु हुदैन की हाम्रो यो शरीर पनि प्रकृतिको उपहार हो । आज हामीले प्रकृतिको अवहेलना गरेका छौं र यही कारण रोगको दलदलमा प्रवेश गर्दैछौं । हामीले यदि रोग नलागोस भन्ने हो भने हामीले खाने हरेक बस्तुमा परिवर्तन हुन आवश्यक छ । प्रकृतिले दिएको जडिबुटी छोडेर हामीले रासायनिक तव्व मिश्रण गरेको औषधीको सेवन बढी गरी रहेका छौं । रोगको प्रमुख कारण भनेकै यी बस्तु हुन भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ ।
हाम्रो खानपिन सवै प्रकृतिभन्दा भिन्द छ । रोगको प्रमुख कारण भनेकै हाम्रो खानपान र रहन सहन प्रमुख छ । दु:खित खानाले रगतलाई समेत दु:खित पार्दछ । दु:खित रगतले मानिसको दिमागलाई समेत दु:खित पार्छ । दु:खित रगतले मानिसलाई गलत काममा उक्साउछ ।
रगत शुद्ध भएमा कालान्तरमा कुनै पनि रोग नलाग्ने हुन्छ यही कारण सत्ययुगका मानिस निरोगी थिए र उनीहरूमा कुनै खराबी थिएन धेरै लामो आयुसम्म बाचेका थिए भन्ने प्रमाण फेला परेको छ । न भगवान थिए न छन् भगवान भनेको त हामी जस्तै मानव थिए । उदाहरणको रूपमा हामीले गौतम बुद्धलाई लिन सकिन्छ । आज मानव भएपनि बुद्धलाई भगवानको रूपमा पुज्ने चलन छ ।
*डा. राम बहादुर बोहरा नेपाल वैकल्पिक चिकित्सा विकास परिषद नवलपरासीको अध्यक्ष तथा आयुर्वेद डाक्टर हुनुहुन्छ ।
← किन कालो चिया नै खाने ?
विरेनुन र यसको प्रयोग →
के मानिसको तीनवटा आँखा छन् ?
सेप्टेम्बर 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 1
जीवन उपयोगी स्मरणीय तथ्यहरु
अप्रील 20, 2018 साइन्स इन्फोटेक 2
१० विश्व-प्रसिद्ध भनाईहरू
अप्रील 13, 2018 साइन्स इन्फोटेक 0
यस्ता छन्, रोग लाग्ने कारणहरु, जानी राखौ
गर्मी याममा के खाँदा बढी फाइदा हुन्छ ?
नास्टद्वारा २० वैज्ञानिक, प्राध्यापक र विद्यार्थी पुरस्कृत
आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजना गरिने
प्रत्येक प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गरिने
अन्तरिक्ष अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने
रगत परिक्षण किन गर्ने ?
यूरिक एसिड बढ्दा खान नहुने खानेकुराहरु
महिलाको यौन अंगको सफाईमा फिटकिरी प्रयोग
पाको उमेर र सेक्स
सेक्स सन्तुष्ति नहुनुका कारणहरु
यौवनशक्ति कमजोर हुनुको कारण यस्तो छ